‘आधारभूत विकास मेरो पहिलो प्राथामिकता हो’ | Suchana Patra ‘आधारभूत विकास मेरो पहिलो प्राथामिकता हो’ | Suchana Patra
‘आधारभूत विकास मेरो पहिलो प्राथामिकता हो’
| पुष १६, २०७४ | १०२८ पटक हेरिएको
प्रदेशसभा सदस्य दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१)
दाङ क्षेत्र नं ३ एकका प्रदेश सभा सदस्य तथा सरकारका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी संग प्रदेश सता तथा प्रतिनिधि सभाकोनिर्वाचन पछि विभिनन विषयमा सूचनापत्रले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । सम्पादक ।
निर्वाचनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको आधार निर्माण गरेको मेरो बुझाई छ । निर्वाचन संविधान कार्यालयन्वन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको होे । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट आएको परिवर्तनलाई सस्थागत गर्न निर्वाचन अपरिहार्य थियो त्यो भएको छ । निर्वाचनमा हार जित हुनु प्रजातान्त्रीक प्रक्रिया हो । म त्यहि प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको छु । यो निर्वाचनबाट मेरो ५ वर्षको समयलाई अवसरको रुपमा लिएको छु । ५ वर्ष विकास र समृद्धिका लागि लाग्छु ।
विकास र समृद्धिको योजनालाई कसरी लैजानु हुन्छ ?
प्रदेशसभा सदस्यका निर्वाचित भैसकेपछि अब मेरो मुख्य लक्ष भनेको यो मेरो जिल्ला र क्षेत्रको समृद्धि हो । कसरी यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फनै मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ । मैले दाङबाट निर्वाचन लडे र जीते । तर मेरो ध्यान दाङमा मात्रै सिमित पक्कै हुनेछैन । दाङ सहित यो प्रदेशको समुन्नती, बिकास र समृद्धिका लागि अबको मेरो लडाई हुने छ । विशेष गरेर जिल्लाबासीलाई पूर्ण रुपमा यो समयमा विकासको अनुभुति बनाउने प्रयास गर्ने छु । पहिलो प्रयास मेरो ५ नं प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउने हो । त्यो प्रयासमा लागि रहेको छु । प्रयास सफल हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।समृद्धि र विकासका लागि योजनाबद्ध रुपमा जादै छु ।
विकासलाई कसरी सोच्नु भएको छ ?
विकासको अनुभुति गर्न सर्व प्रथम आम नागरिकले आधारभुत आबश्यतक पुरा भएको अनुभव गर्नु पर्छ । मैले आधारभुत कुराहरुबाटै विकास थाल्ने योजना बनाएर आफूलाई मानसिक रुपमा तयार पारेको छु । आधारभुत आबश्यकता भनेको खानेपानीमा पहुच, सडक पहुचको हो । अहिले मेरो मुख्य प्राथमिकतामा यहि छ । अहिले पनि हेर्नुस् दाङ सहित थुप्रै जिल्लाहरुमा सडक बाटोको चरम सास्ती छ । घण्टौँ पैदल हिडेर जीवन व्यथित गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसर्थ सडक सञ्जाल मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरि खानेपानी पनि प्रमुख प्राथामिकताको बिषय हो । पिउने पानी होओस् या सिँचाईका लागि हो ओस् । पानीको समस्या बिकराल छ । यो समस्यालाई चिर्नु मेरो अर्को जिम्मेवारी रहने छ । यसैगरि स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकास मेरो अर्को लक्ष हो । अहिले पनि दाङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भरपर्दो उपचार नपाएर बिरामीहरु बाहिर रेफर हुनुपर्ने अवस्था लामो समय देखि रहदै आएको छ । यो समस्यालाई हल गरेर नागरिकलाई भरपर्दो उपचार सेवा दिलाउनु छ । त्यसका लागि सके सम्म एक वडा एक डाक्टरको ब्यवस्था गराउने दिशामा लाग्ने छु । सबै गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने वातावरण पनि बताउनु पनि अहिलेको आबश्यकता हो । यी आधारभुत समस्याहरुलाई पहिले समाधान गरेर जिल्लाको ठूला योजना र विकासलाई अघि बढाउनु छ ।
दाङमा अवरुद्ध बिमानस्थललाई नियमित गर्नु छ । यो बिमानस्थलबाट हवाई सेवा सन्चालन गरेर यहाँका नागरिकहरुलाई हवाई सेवा दिलाउने प्रयासमा छु । यसका लागि दुइ बटा विकल्प अघी आइसकेका छन । यसमा कुनै कसुरपनि बाँकी राख्ने छैन । जसरी पनि टरिगाउँ एरपोर्ट सञ्चालन गराएर छोडने मेरो उदेश्य छ । शिक्षा, रोजगार लगाएत नागरिकहरुका दैनिक जीवनयापन संग जोडिएका बिषयहरुलाई मैले महत्वका साथ लिएकाको छु । र सोही अनुसार आफनो कामलाई लैजाने छु । समृद्धीकालागि सबै भन्दा पहिला नागरिकका आधारभुत आवश्यक्ता परिपूर्ति मुख्य कुरा हो । म त्यहिँबाटै आफ्नो विकास सुरु गर्ने छु ।
आधारभस्त विकासले मात्रै जिल्ला समृद्ध बन्ला त ?
पक्कै पनि आधारभूत विकासले मात्रै जिल्ला समृद्ध बन्दैन तर समृद्धीको आधार आधारभूत विकास नै हो । मैले पहिलो प्राथामिकता आधारभूत विकास नै लिएको हो भने दोस्रो प्राथामिकता ठूला विकास निमार्णको काम हो । मैले यस अघिको कार्यकालमा पनि धेरै त्यस्ता ठूला योजनाहरु जिल्लामा निर्माण गरिसकेका छु अव पनि आबश्यक ठूला योजनाहरुलाई प्राथामिकतामा नै राखेर जान्छु । तर मैले भनेको आधारभूतबाट अव मेरो विकास सुरु हुने हो । विकासको लागि मेरो अगाडी चुनौतीको ठूलो पहाड छ । तर म त्यो चुनौतीको पहाडलाई फोडेर बाटो निर्माण गर्न सक्नु भन्ने दृढ विश्वासमा छु । किनकी म बिकासका लागि कहिल्यै कसैसंग झुकेन ,सम्झौता गरेन । अव पनि त्यो दृढतालाई कायम राख्छु । यहि विश्वासले मलाई आम नागरिकले मत दिनु भएको हो । चुनौतीलाई सामना गरेर बिकास गर्ने लक्षमा म सफल हुने छु । म नजायज काम गर्दैन । तर जायज काममा कसैले अवरोध गर्न खोज्यो भने मैले त्यो अवरोधलाई छिचोल्न सहजै सक्छु ।
मलाई निर्वाचन जिताउन सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु । मैले के भन्छु भने विकासमा म हिजो पनि तपाईहरु संगै थिए । आज पनि संगै छु र भोली पनि संगै रहेर जिल्लाको समृद्धिमा लागि रहने छु । हिजो पनि बिकास निर्माणको चिन्तनमा डुब्दै आएको र बिकासमा योगदान दिएको व्यक्ति हुँ । आम दङगालीलाई यो मैले भनिराख्नु नपर्ला । बाढीमा ढुब्दा होस या खेत बाझो रहदा होस म तपाईहरु संगै थिए अव पनि कुनै कमि हुन दिने छैन । सुखमा होस या दुखमा होस म तपाई हरुसंगै रहने छु । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर मेरो त्यो भुमिकालाई अँझ सशक्त बनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ ।
‘संस्कार बिनाको शिक्षाले आचरणमा समस्या’
चैतसम्म सवै विद्यालयले शिक्षक पाउँछन: जिशिअ मैनाली